Features iyo codsiga of conveyor fur usheeda-yar
(1) conveyor fur toosan
Xawaaraha qoqobada of fur ee conveyor ka fur toosan uu ka badan yahay in of conveyor ka fur caadiga ah. Under tallaabada ciidanka culus, khilaaf ahbaa dhexeeya qalab iyo Warqada. khilaaf Tani waxay ka hortagtaa wax ka wada qoqobada leh daab muquuninta iyo guulaysta cuf mid ah waxyaabaha la isku ridday, sidaas ogaaday gudbinayeen toosan beegiddaba mashiinka material.This Gaadhsiinta la yar, Gaadhsiinta height waxaa yar, xawaaraha qoqobada Waa wax sare, isticmaalka tamarta waa big.It waa gaar ahaan ku haboon gudbinayeen qalabka budada ah iyo granular la isbeddello wanaagsan, kaas oo inta badan loo isticmaalo qalabka qaadaya. height qaadista guud ahaan waa wax ka badan 8 mitir.
(2) conveyor fur siman
Marka agab u go'an in mishiinka Afyare, ay sabab u tahay khatarta ah waxyaabaha la iyo saamaynteeda iyo khilaaf u dhexeeya mishiinka Afyare, wax badsasho hoose ee mashiinka ma isku shaandheyn la galool ah, iyo kaliya in qoqobada Vane ah helical wado horay u socdo, sida lowska aan qoqobada ay weheliyaan wareeg ee fur ee mooshinka translational, si loo gaadho ujeedada gudbinayeen mashiinka material.The sahlan tahay loading multi-dhibcood iyo dejinta, iyo lagu qasi karaa, kiciyey ama la qaboojiyo isku mar lagu guda jiro gudbinayeen. Qaar xasaasi ku dollar, ay fududahay in la furaysto, wax ayaa burburiyo khasaare, qaab-dhismeedka conveyor fur siman waa mid fudud, fududahay in la rakibo, u ilaaliyaan iyo dhibta.
Ku haboon siman ama wax yar dhiiran uniform Joogta gaarsiinta wax dabacsan, heerkulka deegaanka shaqada waa -20 ~ 40 ℃, heerkulka for gaarsiinta wax - 20 ~ 80 ℃ .Its qoqobada xawaaraha waa hooseeya marka loo eego la conveyor toosan, inta badan loo isticmaalo siman marka la barbar dhigo ama kala iibsiga rabitaan yar qalabka, masaafada gaadiidka guud ahaan kama weyna 70 mitir.
(3) xir biibiile (conveyor rullaluistemadka) conveyor
conveyor tube muquuninta waa daab ah loogu aarayo joogto ah welded gudaha qolof cylindrical, qolof cylindrical wada isku bedbedeli leh daab muquuninta ah. Maaddaama ay ciidamada culus iyo khilaaf, wax ku daray isku bedbedeli doono guryaha iyo kor, wax ka yar tallaabada of cuf iyo slide weheliyaan dusha muquuninta ah, ka dhigi wax la wareeg iyo biibiilaha muquuninta si ay u ogaadaan waxyaabaha ay horay, sida aan qoqobada ay weheliyaan wareeg ee lowska fur for mooshin translational, si loo gaadho ujeedada gudbinayeen wax.
isticmaalka tamarta Low iyo kharashka dayactirka hooseeyo; Marka la quudinayo dhamaadka, waxaa qabsan kara in shuruudaha quudinta sinnayn, oo buuxin kartaa shuruudaha farsamada kala duwan sida gaarsiinta, qas iyo isku qasin at time.It isla habboon in shuban iyo dajinaya multi-dhibic, iyo gaarsiin karo qalabka la heerkulka sare. Habboon ee loogu talagalay gaarsiinta siman qalabka heerkulka sare, Waxay leedahay waafajinta wanaagsan in qalabka heerkulka sare, wax sineyn qaybinta, anti-dhagaxshiidkana dhexdaada iyo shuruudaha anti-wasakhda, iyo sidoo kale hanaanka u baahan loading multi-dhibcood iyo dejinta. Practice ayaa cadeeyay in ay tahay wax ku ool ah in gaadiidka Clinker cement, nuuradda qalalan, ore phosphate, budada macdanta ilmenayt, dhuxusha iyo slag.
size The walxaha mid ah waxyaabaha la daray at tubada dhamaadka ma ahaan doono ka sii weyn tahay 1/4 dhexroor of fur. size walxaha qalabkan tan iyo gacanka feed dhexe ma ahaan doono mid ka weyn yahay 30mm. Si loo hubiyo dhululubo aanu soo saari lahayo ku, heerkulka ku amraya waa in ay gacanta ku hoos 300 ℃. abrasion ee daab iyo weelkiinna waa mid aad u xun oo ah markii gudbinayeen alaabta ceeriin.
(4) dabacsan conveyor fur
mandrel The fur of mishiinka waa dabacsan, si line gudbinayeen la diyaarin karaa sida ay qalooca meesha bannaan ee. Sida laga soo xigtay qaybta dhererka qaybaha (maquufin weyn) dadban iyo vertical ah ee line khariidad, ay mabda 'ka shaqeeya waxaa loogu tala galay sida ay conveyor fur caadiga ah ama conveyor fur toosan.
Waayo gudbinta line loo baahan yahay in si sharci darro ah sida ay u qalooca meel si looga fogaado xaaladda kala iibsiga waxyaabaha la, Marka wax aad u badan ama waxyaabo adag ayaa lagu shubaa qolof mishiinka, muquuninta si xor ah sabeyn doonaa oo aan buuq blocking.The waa small.It waxaa inta badan loo isticmaalo gaarsiinta siman oo toosan qalabka waqti isku mid ah. xawaaraha wareeg waxaa guud ahaan loo baahan yahay in ay ka badan tahay 1000r / min in gudbinta toosan.
waqti Post: Aug-15-2018